Electroplated aluminum alloy machined akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Aluminium alloy electroplating machined akụkụ
Electroplating kewara ogbe plating, gbọmgbọm plating, na-aga n'ihu plating na ahịhịa plating, nke na-tumadi metụtara nha na ogbe nke akụkụ a ga-plated. Ogbe plating adabara ngwaahịa nke izugbe size, dị ka ụgbọ ala bumpers, ịnyịnya ígwè handlebars, wdg Barrel plating adabara obere akụkụ, fasteners, washers, atụdo, wdg na-aga n'ihu plating adabara maka uka-emepụta wires na ibe. Brush plating adabara ele mmadụ anya n'ihu plating ma ọ bụ mmezi.
Ihe nhọta electroplating na-agụnye acidic, alkaline, na acidic na neutral neutral na chromium ngwakọta. N'agbanyeghị ụdị usoro eji arụ ọrụ, tankị na ndị na-ekokwasị ihe na ngwaahịa ndị a ga-ete na ihe nkedo kwesịrị inwe ụdị ngosipụta.
Ouzhan aluminum alloy electroplating nickel plating ngosi:
Kpụrụ nke alloy alloy plating
Electroplating na-achọ ike ọkụ eletrik dị elu ugbu a na tank electroplating na ngwaọrụ electrolytic nke mejupụtara ngwọta electroplating, akụkụ ndị a ga-ete (cathode) na anode. Ngwakọta nke ihe nhọta electroplating dịgasị dabere na akwa mkpuchi, mana ha niile nwere nnu nnu nke na-enye ion ọla, onye ọrụ mgbagwoju anya nke nwere ike ime ka ion ndị mejupụtara n'ime nnu buru ibu mepụta ihe dị mgbagwoju anya, nchekwa nke ejiri pH ihe ngwọta, ihe anode activator, na Special nwekwara.
The electroplating usoro a usoro nke metal ion na plating ngwọta na-ebelata ka metal atọm site na mmeghachi omume electrode n'okpuru ihe nke mpụga eletriki n'èzí, na metal na-edebe na cathode. Ya mere, nke a bụ ihe metal electrodeposition usoro na-agụnye mmiri mmiri frasi uka nyefe, electrochemical mmeghachi omume na electrocrystallization.
Na plating tank nwere electroplating ngwọta, ndị dị ọcha na pụrụ iche pretreated akụkụ a ga-plated na-eji dị ka cathode, na anode ka nke plated metal, na abụọ okporo osisi na-karị ejikọrọ na nti na-adịghị mma electrodes nke DC ike ọkọnọ. Ihe ngwọta electroplating nwere ihe ngwọta mmiri nke nwere ihe ndị e ji ígwè mee, salts conductive, buffers, pH adjusters, na ihe mgbakwunye.
Mgbe emechara ike, ion ndị a na-eme ka ihe dị na electroplating na-agagharị na cathode n'okpuru ọrụ nke ọdịiche dị iche iji mepụta akwa mkpuchi. Ngwongwo nke anode na-eme ka ion ndị na-emegharị ihe na electroplating iji nọgide na-enwe uche nke ion ígwè a ga-ete. N'ọnọdụ ụfọdụ, dị ka ihe mkpuchi chromium, a na-eji anode anaghị edozi edozi nke ndu na ndu-antimony alloy, nke na-eje ozi naanị iji nyefee elektrọn ma na-eduzi ugbu a.
Needsta nke chromium ion na electrolyte kwesịrị idobe ya oge niile na-agbakwunye ogige chromium na ihe ngwọta plating. N'oge electroplating, ogo nke ihe anode, ihe mejuputara ihe nmeputa ihe, okpomoku, njuputa nke ugbu a, ike oge, na-akpali ike, na adighi ike, ike igbanwe, na ihe ndi ozo gha emetuta ogo mkpuchi ma choro ichikota ya. ke ekemini.
Na electroplating, a na-eji ihe ọzọ a na-ete na plated mee ihe dị ka cathode, a na-eji otu ngwongwo ígwè ahụ eme ihe dị ka anode (a na-ejikwa anodol anaghị edozi), electrolyte bụkwa ihe ngwọta nwere ion metal; otu ihe dị ugbu a bụ ntinye n'etiti anode na cathode.
Ojiji Aerospace, ụgbọ mmiri, ihe owuwu, igwe radiator, njem, nhazi akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa ọgwụ na mkpa kwa ụbọchị
Nke gara aga: Bịaru alloy alloy extruded akụkụ
Osote: Nhicha aluminom alloy ụzọ na windo nhazi akụkụ